Akụkọ - Ndị Polymer na-egbochi alụlụ dị egwu dị egwu n'oge nleta dọkịta
N'oge oria ojoo, nsogbu nke ụmụ irighiri mmiri na-arụ ọrụ n'ọfịs dọkịta ezé dị oke.
N'ime akwụkwọ bipụtara n'izu a na Physics of Fluids, nke AIP Publishing, Alexander Yarin na ndị ọrụ ibe ya chọpụtara na ikike nke ngwa ọrụ ma ọ bụ dentist drill enweghị ike ịbụ maka ihe viscoelastic nke polymer nri nri, dị ka polyacrylic acid, nke ha na-eji dị ka obere ngwakọta mmiri na ntọala eze.
Ihe ha rụpụtara juru anyị anya. Ọ bụghị naanị na obere ngwakọta nke ndị polymer wepụrụ mkpochapu kpamkpam, mana ọ mere nke ọma, na-egosipụta isi ihe omimi nke polymer, dị ka ntụgharị-ịgbatị, nke rụzuru ebumnuche ahụ mara mma.
Ha nwalere polymer abụọ FDA kwadoro. Polyacrylic acid gosipụtara ihe dị irè karịa xanthan gum, n'ihi na na mgbakwunye na viscosity elongational dị elu (nrụgide dị elu na ịgbatị), o kpughere viscosity dị ntakịrị, nke na-eme ka imepụta ya dị mfe.
"Ihe dị ịtụnanya bụ na nnwale izizi nke ụlọ nyocha m gosipụtara echiche ahụ kpamkpam," Yarin kwuru. “Ọ bụ ihe ịtụnanya na ihe ndị a nwere ike iji ngwa ngwa mebie mkpocha ikuku site na iji ezé, na-arụ ọrụ dị egwu. Ka o sina dị, ikike ndị na-agbanwe agbanwe bụ́ ndị obere ihe ndị e ji eme ka polymer mepụta siri ike karị. ”
Ihe omumu ha buru akwukwo nke otutu mmiri nke ezé na goms nke ihe ezé ha. Alụlụụ ịgba mmiri nke na-eso nleta dọkịta ezé bụ nsonaazụ nke mmiri na-ezute ngwa ngwa nke ngwa ọrụ ma ọ bụ ike ikuku nke mkpọpu mmiri, nke na-agbapụta mmiri n'ime obere ụmụ irighiri mmiri ma na-eme ka ndị a.
Ngwakọta polymer, mgbe ejiri ya gbaa mmiri, na-egbochi mgbawa; kama, polymer macromolecules nke gbatịa dị ka roba band machibido mmiri aerosolization. Mgbe ngwụcha nke ngwa ọrụ jijiji ma ọ bụ nke ezé eze na-adaba na ngwọta polymer, ihe ngwọta ahụ na-abanye n'ime eriri siri ike, nke a na-eweghachi azụ na ngwụcha nke ngwa ahụ, na-agbanwe mgbanwe ndị a na-ahụkarị na mmiri dị ọcha na dentistry.
“Mgbe ụmụ irighiri mmiri na-anwa ịhapụ mmiri mmiri, a na-agbatị ọdụdụ ụmụ irighiri mmiri ahụ. Nke ahụ bụ ebe nnukwu ike mgbanwe metụtara na eriri igwe-gbatia mgbanwe nke polima macromolecules abata play, ”Yarin kwuru. “Ha na-egbochi elongation ọdụ ma na-adọta ụmụ irighiri mmiri ahụ, na-egbochi aerosolization kpamkpam.”
Ihe ndi American Institute of Physics nyere. Mara: Enwere ike dezie ọdịnaya maka ụdị na ogologo